I-China Ayikho i-MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Phrinta i-Liverpool Bullet Indwangu Ephrinta Yomkhiqizi Wezindwangu Zomnsalo kanye Nomphakeli | Wenchang
Ayikho i-MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Phrinta i-Liverpool Bullet Indwangu Yokuphrinta Ye-Bow Textile
Into No: KWB-2125
Okuphathekayo: 95% Polyester 5% Spandex
UMKHIQIZO WOMKHIQIZO Inhlamvu YENDwangu
Into NO I-KWB-2125
Izinto 95% Polyester 5% Spandex
Isici Isomisi esisheshayo / eseluliwe / esiPhefumula / sokukhotha
Sebenzisa Izingane Bows / Dress / Bag
IMonochrome jacquard iyindwangu edayiwe ye-jacquard-indwangu empunga ye-jacquard ilukiwe ngendwangu ye-jacquard bese idayiwe yaqedwa. Indwangu eqediwe umbala oqinile; i-jacquard enemibala eminingi iyindwangu edayiwe eyenziwe ngentambo bese ilukwa yi-jacquard loom Indwangu ye-jacquard efakwe intambo inemibala engaphezu kwemibili, indwangu icebile ngombala, ayibonakali iyisidina, iphethini inezintathu eziqinile umphumela -dimensional, futhi ibanga liphakeme. Ububanzi bendwangu abukhawulelwe, futhi indwangu emhlophe kakotini iyancipha kancane, ayibholi, futhi ayipheli. Izindwangu zeJacquard zivame ukusetshenziselwa okokukhiqiza okokugqoka okuphezulu noma okuphakathi nendawo noma izinto ezisetshenziswa embonini yokuhlobisa (njengamakhethini, izinto zosofa). Inqubo yokukhiqiza yezindwangu ze-jacquard inzima. Umucu we-warp nentambo ye-weft kuhlanganiswe nomunye nomunye phezulu naphezulu, kwakheka amaphethini ahlukile, ngama-concavities kanye ne-convexities, namaphethini amahle kakhulu njengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane, izinyoni nezilo zilukiwe.
Ukuthungwa kuthambile, kuyabuthakathaka futhi kuyashelela ngokuthungwa okuyingqayizivele, isicwebezelisi esihle, ukubambeka okuhle nokungena komoya, nokuqina kombala okuphezulu (ukudaya intambo). Iphethini yendwangu ye-jacquard inkulu futhi inkulu, futhi imibala ihlukile futhi inokubukeka okuthathu, kuyilapho iphethini lendwangu encane ye-jacquard ilula futhi ingashadile.
Indwangu yeJacquard (amashidi ayi-6)
Indwangu ye-Satin jacquard (indwangu): i-warp ne-weft ihlanganiswe okungenani kanye njalo emicwini emithathu, ngakho-ke i-satin weave yenza ubukhulu bendwangu buphakame, ngakho-ke indwangu iyajiya Imikhiqizo yokwaluka ye-Satin ibiza kakhulu kunemikhiqizo efanayo ye-weave plain ne-twill weave. Izindwangu ezilukwe nge-satin weave zibizwa ngokuthi yizindwangu ze-satin. Indwangu ye-Satin inezinhlangothi zangaphambili nangemuva. Amaphuzu wokuluka ku-loop ephelele mancane, futhi iflothi yinde kakhulu. Ubuso bendwangu bucishe bucijwe ngokuphelele yizintambo eziqondiswa ku-warp noma ku-weft direction. Ukuthungwa kwendwangu ye-satin kuthambile. Indwangu ye-Satin inezinhlangothi zangaphambili nezingemuva, kanti ingaphezulu lendwangu libushelelezi, lihle futhi liyacwebezela. Indwangu ye-satin ejwayelekile kunazo zonke i-satin enemigqa, ebizwa ngokuthi umugqa we-satin. Ihlukaniswe izinhlobo ezimbili zezindwangu: imichilo yama-satin engama-2 wamamitha ama-2 ububanzi nobubanzi be-satin abangama-60 amamitha ayi-8 ububanzi. Inqubo yokuqala yokweluka bese idaya, lolu hlobo lwendwangu ngokuvamile luwumbala oqinile, onokwelulwa ngomugqa ovundlile. Indwangu kakotini emsulwa ishwabana kancane, ayibholi, futhi akulula ukubuna.
Indwangu ye-satin jacquard (indwangu)
Ulwazi lwe "Satin Jacquard Fabric".
I-Twill: I-warp ne-weft zihlukaniswe okungenani kanye njalo emicwini emibili, okungukuthi, 2 phezulu no-1 phansi noma 3 phezulu no-1 phansi. Ukungeza amaphuzu we-warp ne-weft interlacing ukushintsha ukwakheka kwendwangu, ngokuhlangene okubizwa ngokuthi indwangu ye-twill. Isici salolu hlobo lwendwangu ukuthi sincane futhi sinomqondo oqinile wesakhiwo esinobukhulu obuthathu. Kunamagatsha angama-30, amagatsha angama-40, namagatsha angama-60.
Indwangu ye-Satin: I-warp ne-weft zihlanganiswa kanye okungenani izintambo ezintathu zihlukanisiwe, ngakho-ke i-satin weave yenza indwangu ibe yimbi, ngakho-ke indwangu iyajiya. Imikhiqizo yokwaluka ye-Satin iyabiza kakhulu kunemikhiqizo efanayo ye-weave plain ne-twill weave, kanti indawo yendwangu ibushelelezi, iyacwebezela futhi iyacwebezela. I-Plain weave, i-twill weave, ne-satin weave yizindlela ezintathu eziyisisekelo zokuluka nokuluka. Akukho mehluko othile phakathi kokuhle nokubi. Ngayinye inezici zayo. Phakathi kwazo, i-satin kufanele ibe yizindwangu zikakotini ezihlanzekile kunazo zonke.
Langaphambilini Isomiso Esisheshayo seJacquard Mesh 84% Inayiloni 16% Spandex Ukwaluka Indwangu yeShirt / Yezemidlalo / Ijazi
Indwangu Yokuphrinta Yokwezifiso
Indwangu yeLiverpool Bullet
Ukuphrinta Kwe-Bow Textile